Imibono ngesabelo-mali sika-2013/14 | Isolezwe
Imibono ngesabelo-mali sika-2013/14
Isolezwe / 27 February 2013, 10:43am /
26/02/13 DURBAN: Nobuhle Zulu. Ntuzuma: UHULUMENI makathayisele imali ekwakhiweni kwemigwaqo nokufakwa kwamanzi nogesi ezindaweni zasemakhaya. kunyuswe imali yezaguga mgoba zona zihlala nabazukulu abaningi leyo mali igcine ingaseneli, isiphelela obala.
26/02/13 DURBAN: Vela Mbokazi
26/02/13 DURBAN: Zandile Mbonambi
26/02/13 DURBAN: Andile Ngcobo
26/02/13 DURBAN: Ayanda Khumalo
26/02/13 DURBAN: Thulile Mabanga
NAMUHLA amehlo azobe ebheke kuNgqongqoshe wezeziMali kuleli uMnuz Pravin Gordhan njengoba ezokwethula isabelomali sonyaka ka-2013/2014 ePhalamende. Izinto ezibhekwe kakhulu kulesi sabelo ukuthanjiselwa kwabakhokhi bentela abahola kancane bese kuqiniswa kakhulu kulaba abadla izambane likapondo. Ezinye izinto okubhekwe ukuthi uGordhan agxile kuzo wuhlelo lukahulumeni lokwakha amathuba emisebenzi iNational Development Plan nohlelo olubizwa nge-Youth Wage Employment Scheme okuhloswe ngalo ukusiza intsha ithole imisebenzi. Okunye okubhekwe kakhulu yintengo kaphethiloli nokuthi imali yezibonelelo izonyuka kanjani. Isolezwe lixoxisane nabambalwa lizwa amanzi ngobhoko ngabakulindele kuGordhan. ULungi Langa ukhulume namalungu omphakathi, uNqobile Mbonambi wathwebula izithombe.
UMnuz Vela Mbokazi (28) waKwaMashu uthe ubengazi ukuthi isabelomali sinamuhla. Kodwa uthe kumphatha kabi ukuthi namanje ama-thuba omsebenzi awakabi maningi.
“Sibaningi kakhulu esinamakhono kodwa esingawutholi umsebenzi. Ngifisa ukuzwa uNgqongqoshe ekhuluma ngokunyusa amathuba omsebenzi. Okunye okubi ukuthi kuthuthukiswa osomabhizinisi asebevele bephumelele futhi abanamabhizinisi asimeme,” kusho uMbokazi.
Uthe kuyafana noma kunganyuswa imali kagwayi ngoba kwabaningi ugwayi ufana nesinkwa bazowuthenga noma sewubiza.
UNksz Thulile Mabanga (25) waseNtuzuma ufisa ukuzwa ungqongqoshe ekhuluma ngokuthuthukisa izikole zasemakhaya.
“Mihla namalanga sifunda ngezingane ezifundela phansi kwezihlahla ngoba amagumbi okufundela engenele ezikoleni zasemakhaya. Kungakuhle kunyuswe imali yokwakha izikole.
“Kubuhlungu ukuzwa ngezingane ezifundela phansi kwezihlahla,” kusho uNksz Mabanga.
UMnuz Andile Ngcobo (27) waseNtuzuma naye obengazi ngesabelomali esithulwa namuhla, uthe ufisa kwandiswe imisebenzi.
“Sibaningi esingasebenzi futhi iningi lethu kalifundile kodwa siyafuna ukusebenza. Mina ngibona ukwandiswa kwamathuba emisebenzi kungasiza ngisho ekuqedeni ubugebengu ngoba abanye bethu benza ubugebengu ngoba bezama impilo,” kusho uNgcobo.
UMnuz Ayanda Khumalo (27) waKwaMashu yena uthe ufuna kwandiswe imisebenzi. Uthe okunye okubalu-lekile ukuthi kulungiswe ukuletha izindlela zokugqugquzela izingane ukuthi zikukuthalele ukufunda.
“Ukuqinisa izinhlelo zokugqugquzela izingane ukuthi zifunde kungasiza ekunciphiseni abantu abagcina benza ubugebengu,” kusho uKhumalo.
UNksz Zandile Mbonambi (33) uthe kumele kugxilwe ekunyuseni imali etholwa ngabakhubazekile netholwa yizalukazi.
“Ogogo yibona abanakekela izingane zabantwana babo futhi yibo abathwala imindeni eminingi, kungangcono banyuselwe imali yesibonelelo,” kusho uNksz Mbonambi.
UNksz Nobuhle Zulu, waseNtuzuma uthe kungakuhle uhulumeni athasisele imali ekwakhiweni kwemigwaqo nokufakwa kwamanzi nogesi ezindaweni zasemakhaya.
“Okunye okungasiza ukunyuswa kwemali yezaguga mgoba zona zihlala nabazukulu abaningi leyo mali igcine ingaseneli, isiphelela obala,” kusho uNksz Zulu.